Sheekh Cabdullaahi Maxamed Rooble oo duleedka Muqdisho ku dileen Kooxo Hubeysan.. | Mudug 24 Online
Sheekh Cabdullaahi Maxamed Rooble oo duleedka Muqdisho ku dileen Kooxo Hubeysan..
Jul 13, 2018 - jawaab
Rag hubeysan ayaa saakay waxa ay duleedka Magalada Muqdisho ku dileyn Nin Oday ah,kadib markii ay wadada u galeyn Gaari nooca raaxada ah oo uu watay kadibna ay rasaaseeyeen,waxana Ninkaas lagu Magacaabi jiray Sheekh Cabdullaahi Maxamed Rooble.
Falkan dilka ah ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhaxeysa Tareedisho iyo Tabeelaha Sheekh Ibraahim,waxana eheladiisa ay sheegeen in xilliga la dilayey uu watay Gaari NOHA ah,isla markaana ay rasaaseeyeen Rag watay Mootada loo yaqaano dhug dhugleyda,isla markaana ay baxsadeen.
“Isaga oo maraya meel u dhaxeysa Tareedisho iyo Tabeelaha Sheekh Ibraahim ayaa lagu mootooyin lagu hor jaray gaarigii uu watay laguna rasaaseeyey,waxa la saarnaa laba Xaas uu qabay iyo Walaalkiis,rag watay mooto dhugdhugledya ayaa Wadada u galay weyna baxsadeen,wuxuu ahaa Sheekh ka tirsan Culimada Suufiyada gaar ahaan Qaadiriyada ayuu yiri qof ka mid ah eheladiisa.
Goobta falkaan dilka ah ka dhacay ayaa waxaa gaaray Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya wallow aysan u suurtagelin in ay gacanta ku soo dhigaan dadkii ka dambeeyey dilkaas.
Faafaahin Kenya oo ku dhawaaqday in aysan ka tanaasuleyn taako kamid dhulka lagu muran sanyahay.
Wasiirka arrimaha dibedda Kenya, Monica Juma ayaa shaaca ka qaadday inaysan waxba iska beddeli ...
War hada AH Kenya oo ku dhawaaqday go’an Cusub oo ku aadan Khilaafka Somaliya iyo arinta bada.
Dowladda Kenya ayaa si cad u sheegtay in aysan Soomaaliya marnaba gacanta u galin ...
Akhriso war-murtiyeed laga soo saaray Shirweynaha Soo-bandhigidda iyo Xaqiijinta Hannaanka Dhab-u-heshiinta Qaran (Daawo Sawirada)
Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo dib-u-heshiisiinta iyo ergooyinkii shirka ka soo qaybgalay, waxay si wayn ...
War hada AH Magaalada Cadaado Nin Hubeysan oo dad ku laayay xaruun dhaqan celin ah.
Wararka warbaahinta ay ka helayso magaacalada Cadaado ee gobalka Gal-gaduud ayaa sheegaya in nin ...
Dalka Sweden dad badan oo helaya fursado shaqo xagaaga/sommarka soo socda.
sida la filayo shaqooyinka xagaaga ayaa aad u kordhaya guud ahaan wadanka sweden bisha ...
Soomaaliland oo War Ka soo saartay Wada Hadallada La doonayo in La isugu Keeno Labada Dhinac (Akhriso)
Jamhuuriyadda Somaliland waxa ay uga mahadcelinaysaa Dawladda Federaal-ka iyo shacabka Itoobiya sidii milgaha iyo ...
Ciidanka Galmudug oo qabtay Hub iyo Rasaas loo waday kooxda Shabaab (Daawo Sawirada)
Ciidanka Nabad sugida maamul goboleedka Galmudug ee ka howlgala magaalada Dhuuso Mareeb ayaa gacanta ...
Galmudug oo Shaacisay in aana Lagu Mateleen Shirka Wasaarada Arimaha Gudaha Soomaaliya ay Muqdisho Ku Qabatay
Wasaaradda arrimaha Gudaha iyo dowladaha Hoose ee Galmudug ayaa sheegtay inaysan ka qeyb galin ...
Madaxweynaha Galmudug oo Kenya Kula Kulmay Danjiraha Cusub ee Dalka India (Sawiro)
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Mudane Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa Magaalada Nairobi kula kulmay ...
Deg Deg Wiil Mooto Bajaaj la ah oo Goor dhaw Lagu Dilay Muqdisho
Mid ka mida dhalinyarada ku shaqeesata Mooto Bajaajta ayaa Goor dhaw lagu dilay Isgooska ...
Ciidanka Amison oo ka guuraya mid kamid ah fariisimahooda ugu weyn Muqdisho.
Wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Somalia Ambassador Francisco Madeira ayaa ...
Akhriso Sababta ka danbeesay baaqashada kulankii u dhaxeeyay Madaxweyne Farmaajo iyo Muuse biixi.
Waxaa dib u dhacay kulankii lagu waday iney magaalada Addis ababa ee dalka ku ...
Dowlada Ingariiska oo Sharciga dhalashada kala noqoneysa hooyo umul ah.
Shamima Begum oo ku biirtay kooxda isku magacawda Dawladda Islaamka ee Suuriya iyadoo 15 ...
Dowalada Norway oo ka jawaabtay in qaxootiga laga joojiyo dagista Caasimada Oslo.
Ma fiicna in qaxootiga lagu soo rogo inaysan degi karin Oslo sidaas waxaa ku ...
Dowlada Federalka ” Waan bogaadineynaa in aan wada Shaqeyn dhaw la yeelano Maamulka Somaliland”
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay bogaadineysaa sida Madaxweynaha Maamulka Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu ...